लगानी लक्षित कानून | गृहपृष्ठ
Home सम्पादकीय लगानी लक्षित कानून
on: March 14, 2019 सम्पादकीय
लगानी लक्षित कानून
सरकारले आगामी चैत १५ र १६ गते हुने लगानी सम्मेलन सफल पार्न विभिन्न कानून बनाउनुका साथै केहीमा संशोधन गरे पनि सम्मेलनले लगानी जुटाउनेमा भने आशंका यथावत् नै छ । विदेशी लगानीका लागि बाधक ठानिएका ऐनहरू संशोधनका लागि संसद्मा दर्ता भइसकेका छन् भने केही भने संसदीय समितिबाट पारित भइसकेका छन् । यसले सरकार लगानी सम्मेलनलाई सफल बनाउन जोडतोडका साथ लागेको प्रमाणित गर्छ । तर, यस प्रसंगमा दुईओटा प्रश्न अझै छन् ।
विगतका सम्मेलनमा लगानीका लागि प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका लगानीकर्ता नेपालका लगानी सम्बन्धी कानून प्रतिकूल भएकै कारणले मात्रै वास्तविक लगानी गर्न पछि हटेका हुन् त ?
एक, विगतका सम्मेलनमा लगानीका लागि प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका लगानीकर्ता नेपालका लगानीसम्बन्धी कानून प्रतिकूल भएकै कारणले मात्रै वास्तविक लगानी गर्न पछि हटेका हुन् त ? लगानीका लागि ऐनहरू समसामयिक बनाउनु सही हो तर त्यतिले मात्रै लगानी आइहाल्दैन भन्नेमा पनि सरकार सचेत हुनुपर्छ ।
दोस्रो, यी नयाँ ऐन वा संशोधनमा रहेका प्रावधानहरू साँच्चै लगानीकर्ताले खोजेजस्ता छन् त ? यसको उत्तर भने यी प्रावधान अध्ययन गरेर विज्ञ तथा लगानीकर्ताले मात्र दिन सक्छन् । सर्वसाधारणले भने केही समयपछि कति लगानी आयो वा कहाँकहाँ समस्या परे भन्ने समाचार हेरेपछि मात्रै थाहा पाउनेछन् ।
संसद्को अर्थ समितिले ‘सार्वजनिक निजी साझेदारी तथा लगानी सम्बन्धमा बनेको विधयेक २०७५’ पारित गरेको छ । त्यस्तै संसद्मा ‘राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त केही पूर्वाधार संरचना आयोजनाको द्रुत निर्माण तथा विकासका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५’ संसद्मा प्रस्तुत गरिएको छ । अर्को विदेशी लगानीसम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक २०७५’ लगायत केही कानून संसद्मा पेश भएका छन् र केही निर्माण गरी प्रस्तुत हुने क्रममा छन् । यी सबै कानूनले विदेशी लगानीकर्ताका लागि उनीहरूले खोज्ने धेरै पक्षलाई सम्बोधन गर्ने सरकारको दाबी छ । लगानी सम्मेलनमा आएका प्रतिनिधिलाई आश्वस्त पार्न यी कानूनी व्यवस्था पर्याप्त होलान् तर पनि उनीहरू आश्वस्त भइहाल्ने अवस्था भने देखि“दैन । लगानीकर्ताको प्रमुख चासो एकातिर कानूनी व्यवस्था हो भने अर्कोचाहिँ मुनाफाको सुनिश्चितता हो । त्यस्तै कानून कार्यान्वयन कत्तिको प्रभावकारी छ भन्ने पनि उनीहरूले हेर्ने विषय हो । विगतका कानून अपर्याप्त थिए तर लगानी गर्नका लागि पूरै प्रतिकूल भने थिएनन् । तर पनि प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका लगानीकर्ताले लगानी ल्याउन चाहेनन् ।
लगानीको स्वीकृति लगायत प्रक्रिया निकै झन्झटिलो भएकाले लगानी बोर्डलाई शक्तिशाली बनाइएको छ । खास गरी ठूला लगानी भिœयाउन बोर्डलाई बढी अधिकार दिइएको हो । यस्तो अधिकार दिइनु नराम्रो नै हो भन्न त सकिँदैन तर जनउत्तरदायी नहुने नेपालको सरकारी संयन्त्रप्रति अविश्वास गर्ने आधार भने छ । ठूला ठेक्कापट्टा सधैं विवादित हुने र त्यसमा कमिशनको चक्कर बढी चल्ने गरेको छ । फलतः नेपालमा आयोजनाहरू समयमा बन्न सकेका छैनन् । विदेशी कम्पनीले पनि नेपालको यो कमजोरीको फाइदा लिएको पनि देखिन्छ । यस्तोमा लगानी बोर्डका निर्णय सही नै होलान् भन्न सकिँदैन । सरकारका कामकारबाही पनि आश्वस्त पार्ने खालका छैनन् ।
प्रधानमन्त्री नै बोर्डको अध्यक्ष हुने र कतिपय आयोजना विनाठेक्कापट्टा दिन सकिने व्यवस्थाप्रति निकै विरोध भइरहेको छ । खास गरी रेल, मेट्रो तथा पानीजहाज, एयरपोर्टजस्ता ठूला तथा नयाँ प्रविधिका आयोजनामा यस्तो व्यवस्था हुनु विवादास्पद देखिन्छ । यस्ता पूर्वाधारले दीर्घकालीन प्रभाव पार्छन् । तर, नेपालले यस्ता आयोजनाको पक्ष र विपक्षमा गहन अध्ययनभन्दा पनि हचुवाका भरमा तथा लोकप्रियताका लागि गरेको जस्तो देखिन्छ । त्यस्ता आयोजना विनाप्रतिस्पर्धा दिइ“दा मुलुकले थेग्नै नसक्ने अवस्था आउन सक्छ । अझ, त्यस्ता आयोजना वैदेशिक ऋणमा लगानी गर्न दिइँदा पर्ने असरका बारेमा पनि अनुसन्धान भएको छैन । यस्तोमा प्रधानमन्त्रीको निर्णयबाट दिइने आयोजनाका ठेक्का घातक हुन सक्छन् ।
जेहोस्, लगानी सम्मेलनलाई सफल पार्न सरकारले कानूनी परिवर्तनका लागि गरेको प्रयासचाहिँ ठीक छ । अब उसले विश्वसनीय व्यवहार गर्दै तिनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सक्नुपर्छ । यसका लागि सुशासन पनि उत्तिकै जरुरी हुन्छ ।
विना कानून चलिरहेको छ ढुवानी व्यवसाय